Iprogram yeMathematika ephuhliswe ePhillips Exeter Academy
Yikholwa okanye akunjalo, izibalo ziyakwazi ukufundiswa kwezinye iindlela ezintsha, kwaye izikolo ezizimeleyo zizinye zeziko lemfundo eziphambili zokuphayona iindlela ezintsha zokufunda isifundo semveli. Ukufundiswa kwimeko kule ndlela ekhethekileyo yokufundisa izibalo kungabonwa kwesinye sezikolo eziphezulu zokubhukuda e-US, i-Phillips Exeter Academy.
Kwiminyaka edlulileyo, ootitshala base-Exeter bavelise uluhlu lweencwadi zezibalo ezineengxaki, ubuchule kunye nezicwangciso ezisetyenzisiweyo nakwezinye izikolo zangasese nezikolo zokubhonga.
Le ndlela iye yaziwa ngokuba ngu-Exeter Math.
Inkqubo ye-Exeter Math
Yintoni eyenza u-Exeter Math ngokwenene, ukuba iiklasi zenkcubeko kunye nenkqubela phambili ye-Algebra 1, i-Algebra 2, i-Geometry, njl., Iphelile ekuncedeni abafundi abafunda izakhono kunye neengcamango eziyimfuneko zokuxazulula iingxaki. Yonke imisebenzi yasekhaya iqulethe iinjongo nganye kwiklasi yamasiko emveli, kunokuba bahlule kwiinkalo zonyaka zokufunda. Izifundo zematriki e-Exeter zijoliswe kwiingxaki zematriki ezibhalwa ootitshala. Ikhosi yonke iyahluke kwiiklasi zamatriki eziqhelekileyo kuba kukuxhomekeke kwingxaki kunokuba kusekelwe isihloko.
Kwabaninzi, isigaba semveli esiphakathi okanye esikolweni esiphakamileyo samatriki sichaza isihloko kwisithuba seklasi kunye notitshala kwaye ubuze abafundi ukuba bafeze izabelo ezide ekhaya eziqukethe ukuphindaphinda iingxaki zokuxazulula iingxaki, ezijoliswe ekuncediseni abafundi ukuba baqonde kakuhle inkqubo umsebenzi wasekhaya.
Nangona kunjalo, le nkqubo iguqulwa kwiiklasi ze-Exeter zezibalo, ezibandakanya imiyalelo encinane yokufundisa. Kunoko, abafundi banikwa inani elincinci leengxaki zegama ukugqiba ngobunye ubusuku ngokuzimela. Kukho imfundiso encinane malunga nendlela yokuzalisa iingxaki, kodwa kukho i-glossary ukunceda abafundi, kwaye iingxaki zivame ukwakha omnye nomnye.
Abafundi baqondisa inkqubo yokufunda ngokwabo. Njalo ebusuku, abafundi basebenza kwiingxaki, benza okusemandleni abo, kwaye bawubhale umsebenzi wabo. Kule ngxaki, inkqubo yokufunda ibaluleke kakhulu njengempendulo, kwaye ootitshala bafuna ukubona yonke imisebenzi yabafundi, nokuba ngaba kwenziwa kwibalawuli zabo.
Kuthekani ukuba umfundi unenkinga yezibalo?
Ootitshala bacebisa ukuba ukuba abafundi baxhomekeke kwingxaki, baqhelisela ukuqiqa kwaye bahlole umsebenzi wabo. Benza oku ngokwenza ingxaki elula kunye nomgaqo ofanayo neengxaki. Ekubeni i-Exeter isikolo sokubhoda, abafundi bangavakatyela ootitshala babo, abanye abafundi, okanye iziko loncedo lweematriki ukuba zixhambile ngelixa zenza umsebenzi wesikolo emisebeni yazo ebusuku. Kulindeleke ukuba bafeze imizuzu engama-50 yomsebenzi wokugxininisa ubusuku bonke nokusebenza ngokuqhubekayo, nangona umsebenzi unzima kakhulu kubo.
Ngomso olandelayo, abafundi bazisa umsebenzi wabo eklasini, apho baxubusha khona kwisitayela esifana nesemina ejikeleze itafile ye-Harkness, itafile enemibala e-oval eyenzelwe ku-Exeter kwaye isetyenziswe ezininzi kwiiklasi zazo ukuququzelela incoko. Ingcamango ayiyiyo nje ukubonisa impendulo efanelekileyo kodwa umfundi ngamnye ukuba abe nekhefu ekunikezeni umsebenzi wakhe ukuququzelela incoko, iindlela zokwabelana, ukusebenzela iingxaki, ukuthetha ngeengcamango, nokuxhasa abanye abafundi.
Iyini Injongo yeNdlela ye-Exeter?
Nangona izifundo zezifundo zemveli zigxininisa ukufunda okungahambisani nemibandela yemihla ngemihla, injongo yeengxaki ze-Exeter iinjongo kukunceda abafundi baqonde kakuhle imathematika ngokusebenzisa izilinganiso kunye nezilungiso ngokwazo kunokuba nje zinikezelwe. Baya kuza ukuqonda izicelo zeengxaki. Nangona le nkqubo ingaba nzima kakhulu, ngokukodwa kubafundi abatsha kwinkqubo, abafundi bafunda izibalo zemveli zemveli ezifana ne-algebra, i-geometry, nabanye ngokusebenzisa iingcamango ngokwabo. Ngenxa yoko, bayayiqonda ngokwenene nendlela abahambelana ngayo nemiba yeemathematika kunye neengxaki abazifumana ngaphandle kweklasi.
Izikolo ezininzi ezizimeleyo kulo lonke ilizwe ziyamkela izinto ze-Exeter zezifundo zamatriki kunye neenkqubo, ngokukodwa kwiiklasi zeematriki ezihloniphekileyo.
Ootitshala ezikolweni basebenzisa i-Exeter yezibalo zelizwe ukuba le nkqubo inceda abafundi ukuba babe nomsebenzi wabo kwaye bathathe uxanduva lokufunda-kunokuba bafumane nje. Mhlawumbi into ebalulekileyo ye-Exeter imatriki kukuba ifundisa abafundi ukuba banamathela kwingxaki yamkelekile. Kunoko, abafundi bayaqonda ukuba kulungile ukuba bangazi iimpendulo kwangoko kwaye ukufumanisa kunye nokukhungatheka kubalulekile ekufundeni kwangempela.
Iingoma eziphezulu zamaKristu kunye neVangeli kwiNtsuku kaBawo